Xildhibaan katirsan baarlamaanka Soomaaliya oo lagu dhaawacay Muqdisho. – Radio Daljir
Xildhibaan katirsan baarlamaanka Soomaaliya oo lagu dhaawacay Muqdisho.
Muqdisho,Dec,26 -Xildhibaan katirsan baarlamaanka Soomaaliya ayaa maanta ku dhaawacmay rasaas ay ciidamo katirsan dowladda faderaalka ee Soomaaliya ku fureen xilli uu kasoo baxay gurigiisa oo ku yaala degmada Wardhiigley ee gobolka Banaadir.
Xildhibaan Xasan Aadan Aalbaro oo ahaa mudanaha la dhaawacay ayaa la sheegay rasaasta lagu furay inay ka haleeshay mid ka mid ah labadiisa lugood,islamarkaana uu lasocday xiliga uu dhaawacmayay gaari uu isagu lahaa.
Ma jirto wax war ah oo kasoo baxay dowladda faderaalka Soomaaliya oo la xiriirta dhaawaca loo gaystay mudanahan katirsan baarlamaanka Soomaaliya.